SWMC 370-DTH riigga qodista dhulka hoostiisa ayaa si weyn loogu isticmaalaa goobaha dhismaha |
SWMC 370 riig qodista dhulka hoostiisa ayaa si guul leh u dhamaystiray mashruuca gundhigga u ah mashruuca hantida ma-guurtada ah ee Guangzhou, Shiinaha.
Mashruuca hantida maguurtada ah ee Guangzhou wuxuu daboolayaa dhul dhan 62,000 m2, kaas oo 44,000 m2 ka mid ah ay dhulka ka sarreeyaan, 18,000 m2 ay tahay dhulka hoostiisa. Waxaa jira 25 dabaq oo dhulka ka sarreeya, oo ay ku jiraan 4 dabaq oo ka hooseeya masraxa iyo 4 dabaq oo dhulka ka hooseeya. Dhererka guud ee dhismaha waa 108.8m, qoto dheer ee godka aasaaska ah waa 16.9m, iyo aagga maxalliga ah waa 21.1m. The qaab-dhismeedka injineernimada waxaa loogu talagalay sidii la xoojiyay qaab dhismeedka derbiga xiiran jir ah oo la taaban karo iyo aasaaska waxaa loogu talagalay sida aasaaska raft siman.
Iyadoo la tixgalinayo saamaynta ka-hortagga sabbaynaya ee dabaqa hoose, kooxda boodhka-iska-hortagga ah ayaa lagu dejiyay goobta koonfureed ee mashruucan. Dhexroorka boodhka ka-hortagga sabbaynaya waa 130mm, kala dheerayntuna waa 780mm, qoto dheerna waa 8m.
Xulashada mishiinada qodista ayaa saameyn muhiim ah ku leh horumarka siman ee aasaasiga ah ee mashruuca ka hortagga sabaynta.SWMC waxay dooratay mashiinka qodista dhulka hoostiisa ee SWMC 370 ee shirkadda dhismaha, kaas oo u dhigma laba qaybood oo ah SULLAIR American 600RH air compressor, oo leh cadaadis shaqo oo ah 1.7 Mpa iyo barokaca hawada 17m3. Waxay leedahay hufnaan shaqo oo sarreeya, isticmaalka tamarta yar, qaab-dhismeedka farsamada fudud, hawlgal ku habboon iyo xakamaynta, kaas oo hagaajin kara xakamaynta xuduudaha qodista wakhtiga dhabta ah, iyo waxqabadkeeda iyo hufnaanteeda waxay dabooli kartaa baahida mashruuca.
Mashiinka qodista dhulka hoostiisa ee SWMC 370 waa mashiinka qodista dhulka hoostiisa sare ee waxqabadka sare leh, isagoo siinaya hufnaan sare, isku halaynta sare iyo mashiinnada qodista multi-functional ee aasaaska grouting engineering.In mashruucan, codsiga SWMC 370 mashiinka qodista dhulka hoostiisa, ayaa si weyn u wanaajinaya waxtarka dhismaha.
Sababtoo ah dhagaxa ayaa asal ahaan mugga jabay, halkii uu shiidi lahaa jabay, oo ay weheliso xawaare sare oo dheecaan ah, god hoose oo nadiif ah, ma jirto dhacdo burbur ah oo soo noqnoqota, sidaas darteed SWMC 370 mishiinka qodista hydraulic, wuxuu leeyahay waxtarka qodista sare iyo isticmaalka tamarta marka loo eego wareegtada guud. qodis.
Qalabka qodista ee SWMC 370 wuxuu dhamaystiri karaa godadka qodista tayada leh, iyadoo ay ugu wacan tahay saamaynta hydraulic DTH ee godka hoose, inta jeer ee dhagaxa dhagaxa ah waa mid aad u gaaban, dhagax adag dhagax adag ayaa isbeddelaya saameynta burburinta ma ahan mid weyn, ma fududa in la sameeyo qulqulka leexinta xoogaa yar. , sidaas darteed samaynta xeerarka daloolka, tayada wanaagsan, nadiif ah, oo si wax ku ool ah uga hortagi kara dhagax adag iyo formation adag godka qodida u janjeera dhibaatada. la dhimay, markaa ma fududa in gidaarka daloolku dumo iyo shilalka kale.
Mashiinka qodista dhulka hoostiisa ee SWMC 370 ayaa waxaa ammaanay kooxda dhismaha ee mashruucan sababtoo ah faa'iidooyinka ay ka mid yihiin isku xirka fudud, dhismo habboon, cadaadis cad iyo muddada dhismaha oo gaaban. Hadda waxa si weyn loogu isticmaalaa dhismaha mashaariicda dhismaha.
Waqtiga boostada: Noofambar-05-2020